UNGAYISEBENZISA NJANI IPEYINTI UKWAHLULA IINDAWO EZINCINCI - UHLOBO
Yahlulahlula umbala: Uyisebenzisa njani ipeyinti ukwahlula iindawo ezincinci
Kumakhaya amancinci apho igumbi elinye lihlala lisebenza imisebenzi emininzi, umbala unokwahlula isithuba kwimimandla enemisebenzi eyahlukeneyo. Ukuba igumbi lakho lokulala ikwiofisi yakho kwaye igumbi lakho lokuhlala ikwayigumbi lakho lokutyela, zama ukusebenzisa ipeyinti njengesahluli esibonakalayo kwicandelo ngaphandle kweendawo-ngaphandle kokubingelela nge-intshi yendawo yokuhlala.
(Ityala lemifanekiso: Izinto zangaphakathi zeShift )
Ukwenza nkulu indawo kwindawo encinci yangaphambi kwamanzi, abayili kwi Izinto zangaphakathi zeShift upeyintwe umgca obanzi ongwevu-luhlaza ngaphezulu kwedesika ukwahlula le ndawo yomsebenzi kwigumbi lonke. Ngempembelelo engqindilili, penda ibhloko yombala, njenge-peachy-pink eboniswe ngasentla I-Mobel Pobel .
(Ityala lemifanekiso: Adrienne Breaux)
Ipeyinti yelanga etyheli yahlulahlula le ofisi ivaliweyo yajika yaba yipaseji edibeneyo e-Laura & Ray's Art-Filled Austin Home.
(Ityala lemifanekiso: Ucoceko )
Yenza isikhululo sokubamba kwigumbi lakho lokulala ngaphandle kokutyala imali kwinto engento. Yenza ipeyinti yesikwere esimibalabala eludongeni uze udibanise ishelufu engekho nzulu epeyintiweyo ukuze itshatise, njengoko kubonwe kuyo Ucoceko , ngasentla.
Ithetha ntoni i-777 ngokwasemoyeni
(Ityala lemifanekiso: Iilwandle )
Ipeyinti eluhlaza eluhlaza iboleka ukuzola kwi-alcove yokulala ehleli kwindlu enkulu enophahla efunyenwe kuyo Iilwandle .
(Ityala lemifanekiso: UDomino )
Idweliswe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, eli khitshi lincinci lincinci lisuka UDomino ndiziva ndonwabile, kunokuba ibe yinto encinci ehlekisayo.
(Ityala lemifanekiso: Umdibaniso D. )
Unyango lombala weethoni ezimbini lubonisa le ndawo incinci yokutya ibekwe kanye embindini wendawo enezithuthi ezininzi. Abaqulunqi Umdibaniso D. usebenzise udonga lweglasi egudileyo ukucacisa indawo ngaphandle kokongeza isithintelo esibonakalayo.
(Ityala lemifanekiso: Liana Hayles Newton)
Udonga lwamalahle ludibanisa ngaphandle kwetafile yeplanga emnyama eSaadia, eKip naseBetsy eBrooklyn Base, kusenziwa igumbi lokutyela elihlangeneyo nelimanyeneyo elihleli kamnandi phakathi kwekhitshi negumbi lokuhlala.
(Ityala lemifanekiso: UCaroline Olssen )
Awusoze uqagele ukuba le nook yokufunda ehambelana nombala ibekwe ecaleni kwegumbi lokutyela-iyenza indawo efanelekileyo yokuhlala emva kwesidlo esikhulu. Umyili UCaroline Olsson yatshayela ipeyinti eluhlaza eludongeni, ethi yona itshintshe ibe yiminti eluhlaza xa ithi ifike eluphahleni.
Ndixelele, bahlali besithuba esincinci, ungacinga ukusebenzisa ipeyinti ukwahlula igumbi?
UKatie ungumlandeli wazo zonke izinto ezenziwe ngezandla kunye nezinto ezenziwe ngendalo.
Nanku umahluko wokwenene phakathi kokuBhengezwa kunye nokuThengiswa okuMfutshane
Indawo kaDade waseWest Elm yindawo yokuqala omele uye kuyo ngokuKhanyisa okutsha
Umdlalo owenziwe ezulwini: I-Copper + Pink
Sebenzisa iVeki yoSuku lwaBasebenzi ukuze ucoceke, Ikhaya elonwabisayo-Nantsi indlela
Ithetha ntoni i-1010 kumanani eengelosi
ngubani u-7 11 inani
ukubaluleka kwenombolo 444